“Tv-ga Iyo Ilaacada Radio Hargaysa Oo Barnaamijyo Live Ah Ka Soo Tabinaayay Studio Casri Ah Oo Laga Dhisay Boorame.” | Saxil News Network
“Tv-ga Iyo Ilaacada Radio Hargaysa Oo Barnaamijyo Live Ah Ka Soo Tabinaayay Studio Casri Ah Oo Laga Dhisay Boorame.”
Wasaaradda Warfaafinta Somaliland ayaa xarun cusub waxay ka furtay Caasimadda Gobolka Awdal ee Boorame,xaruntan cusub waxay ka koobantahay dhawr qaybood oo isugu jira, Istuudyaal ay barnaamijyada ka soo gudbin doonaan Tv-ga Qaranka iyo Radio Hargaysa, qayb ay ka hawl galidoonaan Abwaanada iyo bahada dhaqanku, qaybtii Wargayska iyo Saxaafadda Online ah.
Munaasibad ballaadhan oo maanta lagu qabtay Magaalada Boorame ayaa xadhiga lagaga jaray xaruntan Wasaaradda Warfaafintu ugu tallo gashay Gobolada Awdal iyo Salel, Wasiirka Warfaafinta oo ay weheliyaan Madaxda Gobolka iyo Degmadu ayaa ugu horeyn xadhiga ka jaray, kadibna kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee xaruntaas oo si dhammaystiran loo qalabeeyay. Istuudyaha Telefeeshinka ayaa loo dhamaystiran qalabkii bahinaayay barnamaijyada, halka Istuudyaha ilaacada Radio Hargaysa iyo qaybaha dhaqankana la qalabeeyay, sidoo kale Xafiisyo ay u dhanyihiin agabku ayaa qayb ka ah. Tv-ga Qaranka iyo Radio Hargaysa ayaa xalay iyo Saaka ka soo tabinaayay Barnaamijyo toos ah (Live) Studio-ga Wasaaraddu ka hirgalisay Boorame.
Waxgaradka iyo shacbiga degaanada Awdal ayaa si weyn u soo dhaweeyay hirgalinta xaruntan oo baahi weyn ay u qabeen degaanadaasi. Saladiinta Gobolka Awdal oo hadalo ka jeediyay xaflad lagu daahfuraayay xarunta Wasaaradda Warfaafinta, ayaa si weyn ugu hanbalyeeyay Madaxda Wasaarada. “Dawladnimadu waa geed midho leh oo marba midhkii ka soo dhaca la tiriyo, hadaanu nahay Madax dhaqameedka waxaanu leenahay tan (Xarunta Cusub) Kow dheh”. Sidaa waxaa yidhi Suldaan Saleebaan Cali Cismaan.
Guddoomiyaha Gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax) iyo Maayarka Maagalada Boorame Saleebaan Xasan Xadi oo iyana ka hadlay Munasibadii furitaanka, ayaa dareen farxadeed ka muujiyay hirgalinta xaruntan cusub, waxayna shegeen inay dhib weyn ka haysatay maamul ahaan meel sidan oo kale ah oo Saxaafadda Gobolka hoy u noqota.
Mareeyaha Tv-ga Qaranka, Khadar Xasan Cali Gaas, oo kamid ahaa masuuliyiinta Wasaaradda ee uu hoggaaminaayay Wasiirka Warfaafintu, ayaa ka waramay talabooyinkii kala duwanaa ee ay u soo mareen sidii Gobolka Awdal looga samayn laha xarun Wasaaradu leedahay, Mud. Gaas wuxuu tilmaamay inay xaruntani tahay talabaad ee ugu wayan Wasaaradda, marka laga reebo mida Hargaysa. Wasiir ku-xigeenka Ganacsiga Somaliland, Bashiir Cabdi Xariir oo aqoon durugsan u leh dhinaca dhaqanka, ayaa sheegay maruu ka hadlaayay Munaasibadaas, muhiimada uu leeyahay ilaalinta dhaqanka iyo afka Hooyo, isagoo ku bogaadiyay Wasaaradda Warfaafinta dadaalka ballaadhan ee ay muujisay. Wuxuuna kula dar-daarmay shacbiga rer Boorame inay ilaashadaan xaruntan oo aan ku koobnaan doonin dhinaca Wararka oo kaliya balse ay uga faa’iidaysan karaan dhinacyo badan. Wasiirka Warfaafinta dhaqanka iyo wacyigalinta Somaliland, Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo soo xidhay xafladii lagu furaayay xarunta cusub ee Wasaaradda, ayaa sharxay u jeeda ay Wasaaradda Warfaafintu xooga u saartay Gobolka Awdal iyo Gobolada kale, isagoo ku micneeyay Siyaasadda Xukuumadda Madaxweynaha Somaliland Mud. Axmed Sildaanyo inay farayso maamul daadajin lagu sameeyay haykalka dawliga ah, Wasaarada Warfaafintuna ka midtahay Wasaaradaha ay shacbigu ugu baahida badan yihiin.
Geesta kale wuxuu si weyn ammaan u huwiyay Wasiir Cukuse, Saladiinta iyo madaxda dhaqanka Degaanada Awdal iyo Salal. “Xaruntan cusub ee Wasaaradda Warfaafintu ka hirgalisay Boorame, sidaa loo sheegay waxay ka koobnaan doonta dhammaan dhinacyada kala duwan ee Wasaaradda, sidoo kale waxay xarun u noqon doonta Saxaafadda madaxa banaan ee Gobolka, oo aanu ku soo dhaweynaayo inay hawlahooda ku qabsadaan. Waxaan idin sheegayaa uun hadad tihiin rer Awdal iyo Salal, caashaq cusub ayaa jira ee idina soo dhaweeya”. Sidaa waxaa yidhi Wasiir Cukuse.